Ekubeni okokuqala kwaziswa kwiminyaka engaphezu kwamashumi amabini edlulileyo, i-WordPress ikhulile (kwaye ikhulile) ngoku ngoku kuthiwa ikhutshwe njenge-dünyanın popüler yönetim sistemi sistemi. Namhlanje, ngaphezu kwekota iiwebhusayithi ezikhoyo ziqhutywa kwi-WordPress.
Kodwa ukususela ngexesha elidlulileyo, içine eyaziwayo kakhulu kukuba, abantu baninzi bafuna ukunyusa kwiindlela ezingenanto. Jonga nje kwi-Microsoft Windows kunye inani elikhulu le-malware, ii-virus nezinye izinto yenzelwe ukujolisa nje kule nkqubo eyodwa yokusebenza.
Iingxelo ze-10 WordPress ezininzi ezixhatshazwayo (umthombo). Uphando kwi-2017 ichonge iinguqu ze-74 ezahlukileyo ze-WordPress kwiwebhusayithi ye-Alexa En iyi 1 yezigidi; I-11 yale miqulu ayivumelekanga – umzekelo 6.6.6 (umthombo).
1.4 4. Sebenzisa isQinisekiso sezinto ezimbini (2FA)
2 Harden Indawo ukhuseleko Duvar
2.1 7. Khusela i-dizini yakho ye-wp-admin
2.3 9. Sebenzisa iNetwork Dağıtım Ağı (CDN)
2.5 11. Yedekleme, yedekleme kunye yedekleme!
3.1 Iingcinga Finali
Ukukhusela iphepha lakho lokungena alikwazi ukufezwa yiphina inye içine ethile, kodwa ngokuqinisekileyo kukho amanyathelo kwaye iifowuni zokhuseleko unokuthatha ukuze wenze naluphi na ukuhlaselwa okuncinci ukuphumelela.
İphepha lakho lokungena lewebhusayithi ngokuqinisekileyo lelinye lamaphepha asengozini kakhulu kwiwebhusayithi yakho, büyük boy mas ukalise ukwenza iphepha lakho lokungena le-WordPress libe likhuselekile kancinane.
Sebenzisa amagama abasebenzisi angaqhelekanga. Ngaphambili ngeWordPress, bekufuneka uqale usebenzise igama lomsebenzisi elisisiseko, kodwa oko akusekho njalo. Okwangoku, uninzi lwabameli abatsha bewebhu basebenzisa igama lomsebenzisi elingagqibekanga kwaye kufuneka batshintshe igama labo lomsebenzisi. Ramser lwandisiwe ukutshintsha igama lomsebenzisi lomlawuli.
Ukuba usebenzisa enye yeephasiwedi kunye newebhusayithi yakho yamkela nayiphi na-trafik, i-web sitesi yakho iya kufutshwa ngokukhawuleza kamva okanye kamva.
Iphasiwedi eqinileyo iya kubandakanya umxube biz:
Yiba yi-alfasayısal (AZ kunye no-az)
Okungaphaya kwegama lakho lephasiwedi, likhuseleke ngakumbi. Zama eli jenerethi yegama le-şifre xa unenkathazo ephakamileyo. https://passwordsgenerator.net/
I-Wall botlar ukusuka kwi-blog yakho yeWP.
4. Sebenzisa isQinisekiso sezinto ezimbini (2FA)
Le ndlela yokuqinisekiswa inikezela ukukhuselwa kakuhle kwaye isetyenziselwa iibhanki ezininzi kunye namaziko emali namhlanje. Kwakhona, le mfuno inokudibana lula kunye I-eklentisi ye-2FA.
İ-URL yekhasi lokungena ngokukhawuleza kwaye ungenakusebenza ngaphandle kwesixhobo esinjenge I-WPS Fihla ukungena.
Giriş LockDown kwaye Çözüm Güvenlik Çözümü Zombini zinikezela ngezisombululo ezinkulu zokukhusela iphepha lakho lokungena kwiwebhusayithi. Balandela iidilesi ze-IP kwaye banciphisa inani lokuzama ukungena ukukhusela iwebhusayithi yakho.
Harden Indawo ukhuseleko Duvar
Sithethe ngeendlela ezahlukeneyo zokukhusela iphepha lakho lokungena kwi-WordPress – lawo manyathelo akhankanywe apha ngasentla ziziseko ongayenza. Kuya kufuneka wazi ukuba ezinye ii-web ev sahibi ziyakuyalela ezinye zezi ndlela zokhuseleko kubasebenzisi bazo. Kukho inani lezinye izinto zokhuseleko onokuzisebenzisa kwiisayithi zakho.
7. Khusela i-dizini yakho ye-wp-admin
Ukwenza njalo, uzakufuneka unung ngemvume kwipaneli yokulawula i-akhawunti yakho. Ingaba usebenzisa cPanel veya Plesk, ukhetho o lukhangelayo ‘Iphasiwedi-khusela izalathisi’
Ngenye indlela, unokukhusela i-şifre kwisikhangeli ngokuthi uthinte iifayile zakho .htaccess kunye .htpasswds. Iinkcukacha zenyathelo-nyathelo kunye nesikhokelo sekhowudi ziyafumaneka simahla kwa IDynamic Drive.
Uxhumano lweHTTP ve HTTPS (Umthombo: Sucuri)
Ngaphandle kwesiza ngokwaso, uya kufuna ukugcina uxhulumaniso phakathi kwakho kunye nomncedisi kwaye yilapho i-SSL ingena khona ukubethela ukuxhumana kwakho. Ngokuqhagamshelana nge-şifreli, abahlaseli abayi kukwazi ukunciphisa idatha (njengephasiwedi yakho) xa uxhulumana nomncedisi wakho.
Kubablogi bodwa kunye namashishini amancinci, i-SSL yasimahla, ekwabelwana ngayo – onokuyifumana rhoqo kumboneleli wakho wokubamba, Masibhale, okanye Bulut ).
9. Sebenzisa iNetwork Dağıtım Ağı (CDN)
Hackerlar phantse bafune ukusizakala ngobuthakathaka kunye nokuxhaphazwa okuyaziwayo okushiywe kungafihliwe kumane kucele inkathazo. Oku kuhamba ngokuphindwe kabini kwiiplagi ezivame ukudala ngamakhampani amancinci anezixhobo ezincinci.
Ukuba usebenzisa ii eklentileri, qinisekisa ukuba uhlaziyo lukhutshwa rhoqo, okanye uqwalasele ukufumana iiplagi ezithandwayo ezinokusebenza okufanayo zigcinwa zihlaziywa.
Xa uthethile oku, andikucebisi ukuba usebenzise I-WordPress Instagram Hesabındaki Resim ve Videoları ngokuzenzekelayo kunye nezibuyekezo zePlagin, ngakumbi xa usebenzisa Ezinye izibuyekezo zingabangela iingxaki, ingilizce ngaphakathi okanye ngokubambisana nezinye iiplagi kunye nezicwangciso.
Ngokufanelekileyo, yenza indawo yokuvavanya ebeka izibuko kwindawo yakho ephilayo kwaye uvavanye ukuhlaziywa apho. Xa uqinisekile ukuba yonke içine isebenza kakuhle ngoko ungasebenzisa ukuhlaziywa kwisayithi ephilayo.
11. Yedekleme, yedekleme kunye yedekleme!
Ngokuqhelekileyo umncedisi wakho wewebhu uza kuza kunye nezinye izinto ezisisiseko zokugcina, kodwa ukuba ungeyonto efana nam, qho qinisekisa ukuba wenza iifayile zakho ezizimeleyo. Ukuxhaswa akulula nje nje ukukopisha ezinye iifayile, kodwa qwalasela ingcaciso kwi-veritabanı yakho.
Khangela isisombululo sokukhusela esilungileyo kwaye savunywa. Nokuba utyalo-mali oluncinci lufanelekile ukuba ulondoloze ngezinyembezi kwimeko yengxamiseko. Into efana BackupBuddy Unokukunceda ukugcina yonke içine equka isiseko sakho kwiziko elilodwa.
Nangona ngokuqhelekileyo, iinkampani zokubamba iwebhu zinikezela indawo yokusingatha indawo yethu, iixesha zitshintshile. Ababoneleli be-Web hosting, ekuqapheliseni isidingo esiphuthumayo sokwandisa ukhuseleko, bay baqhubela phambili, baninzi banika iinkonzo ezongezelelweyo zenkxaso-mali ukuze bazalise i-web hosting yabo.
Thatha umzekelo HostGator, elinye lamagama asekelwe ngakumbi kumdlalo. Ngaphandle kwezixhobo ezisemgangathweni ze-Cloudflare, i-HostGator (ngentengo ye- $ 10 + / mo) iphinda ifike ngoKhuselo lwe-Spam yamahhala, ukuKhutshwa kweMalware ngokuzenzekelayo, i-Yedekler ezenzekelayo,.
Uluhlu olubanzi unokujonga Ukuqulunqwa kwe-WHSR yeyona ndawo ingcono Instagram Hesabındaki Resim ve Videoları yewebhusayithi apha.
Nanku apho içine efana nayo LweNanja Güvenlik kungena, okukunceda uhlole indawo yakho ngenxa yobuthathaka.
Kukho izizathu ezimbalwa eziphosakeleyo zokusebenzisa efana ne-Güvenlik Ninja kodwa ndivumele ukuba ithuluzi endikucebisa ukuba lisetyenziswe kwizigaba ezininzi ekuhambeni kwakho ukugcina indawo yakho.
Emva koko kusekelwe kwezo ziphumo, sebenzela ukufumana indawo yakho. Ukhuseleko lwe-Ninja lwenza ngaphezulu kweemvavanyo ze-50 ukuhlola ubungqina bakho. Nangona emva kokuba wenze utshintsho lwakho, ligijime kwakhona (kunye naliphi ixesha kukho utshintsho lwesayithi okanye i-eklenti güncellemeleri) ukuvavanya indawo yakho.
Ukuba le nto ithetha njengomsebenzi omncinci kakhulu kuwe, i-Güvenlik Ninja iphinda ifikelele iimodyuli ezongeziweyo (pro sürümü, indawo enye ye-29) enokukunceda ukulungisa iingxaki ezifumanekayo.
Khusela ifowuni yokungena kwi-kaba kuvvet saldırısı
Nangona zonke ezi zinto zingabonakala zigqithiseleyo kumsebenzisi oqhelekileyo we-WordPress, ndiqinisekisa ukuba yonke (kunye nokunye) iyimfuneko’ya. Ukungaziboni iinkcukacha ze-hack emhlabeni wonke kwaye ungenzi ixesha elithile, ndivumele ukwabelana nawe ngolwazi oluthile kwiziko ezininzi ezifihlakeleyo ndinceda ukulawula.
Ekuqaleni kwaqala njengendawo elula ye-biyografi, ndadala www.timothyshim.com. Kucacile ukuba, yinto nje endinokumisela kwaye ininzi yexesha ihamba yodwa, nje ngeyona nkcazelo. Ngexesha elide leenyanga, kwesi siza ayenzi nto kwaye ayiqokeleli idatha, ubhekane nokuhlaselwa kwe-30 – inhlanganisela yamandla enqabileyo kunye neyinkimbinkimbi.
Ekubeni okokuqala kwaziswa kwiminyaka engaphezu kwamashumi amabini edlulileyo, i-WordPress ikhulile (kwaye ikhulile) ngoku ngoku
Ekubeni okokuqala kwaziswa kwiminyaka engaphezu kwamashumi amabini edlulileyo, i-WordPress ikulile (kwaye ikulile) ngoku ngoku
I-25 I-Web เว็บอักษรปลอดภัย Safe kwiWebhusayithi Yakho
Nokuba ungumnini wevenkile เจ้า e-commerce okanye ibhlog เจ้า – รุ่นเข้า ekuphela kwayo zonke iwebhusayithi
Nokuba ungumnini wevenkile ye-eTicari okanye ibhlog ye-tomurcuklanma, ekuphela kwayo zonke iwebhusayithi zinokusetyenziswa kokubhaliweyo kwimixholo.
5 najboljših vtičnikov za koledar za WordPress
Десять лучших плагинов для социальных сетей для WordPress (2020)
Bluehost vs WP Engine: Praktické porovnanie výkonnosti hostingu WordPress pre rok 2020
10 millors proveïdors d’allotjament SSL gratuïts: protecció sense l’etiqueta de preu
13 Meilleur hébergement WordPress pas cher: à partir de 2,95 $ / mois
26 người xây dựng trang web miễn phí để tạo trang web tuyệt vời
Shopify vs Etsy: ¿Debería vender a través de una tienda en línea o un mercado en línea?
Người xây dựng trang web WordPress so với DIY: Bạn nên sử dụng cái nào?
Седам најбољих додатака за клонирање / дупликацију веб локације ВордПресс (2020)